Amisom oo sheegtay inay baareyso dadka ciidamada Itoobiya ay ku laayeen Gobolka Baay – STAR FM SOMALIA
Taliska Ciidamada Midowga Afrika ee Amisom, ayaa sheegay inay soo gaartay eedeymo la xiriira in ciidamada Itoobiya oo howlgalka Amisom qayb ka ah dad shacab ah ay ku laayeen Gobolka Baay.
Qoraal kooban oo Amisom ay ku soo qortay Barta Twitterka ay ku leedahay ayaa lagu sheegay inay maqleen eedeyntaasi, Taliska Amisom uu si degan baaritaan ugu sameyn doonaan dhacdadaan.
Amisom waxa ay sheegeen eedeymaha soo gaaray inay sheegayeen in ciidanka Itoobiya dad shacab ah ay ku laayeen deegaanka Wardiinle oo ka tirsan Gobolka Baay.
Taliska Amisom ayaa wuxuu sheegay in eedeynta ama dilka Dadkaasi uu soo ifbaxay kadib Dagaal culus oo ciidamada Amisom iyo kuwa Al Shabaab ku dhexmaray Deegaanka Wardiinle ee Gobolka Baay.
Waxaa ay sidoo kale sheegeen sameynta baaritaanadaasi la xiriira dhacdada ay kala kaashan doonaan Mas’uuliyiinta Dowladda Federaalka Somaliya.
Ciidamada Itoobiya ayaa dad shacab ah si bareer ah waxa ay ugu laayeen deegaanka Wardiinle oo hoostagga Magaalada Baydhabo shalay.
Ciidamada Ilaalada Deegaanka oo dib u habeyn lagu sameynaayo (SAWIRRO)